Wasiirrada Arrimaha dibadda iyo Madaxtooyadda oo ka hadlay natiijadii socdaalkoodii Kenya‏. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Wararka Wasiirrada Arrimaha dibadda iyo Madaxtooyadda oo ka hadlay natiijadii socdaalkoodii Kenya‏.
Wasiirrada Arrimaha dibadda iyo Madaxtooyadda oo ka hadlay natiijadii socdaalkoodii Kenya‏.
Wasiirrada Wasaaradaha Arrimaha Dibada Dr. Maxamed Claahi Cumar iyo Madaxtooyada Mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay Caasimada Dalka ee Hargaysa kadib markii ay soo dhamaysteen booqasho ay ku tageen dalka Kenya.
Labadan Wasiir oo ka soo degay madaarka magaalada Berbera ayaa hadal kooban oo ay qolka nasashada ee madaarka ku siiyeen warbaahinta waxay ku sheegeen in socdaalkoodaasi uu guul iyo is afgarad ku soo dhamaaday.
Wasiirka Wasaarada Arrimaha Dibada ee Somaliland Dr. Maxamed Claahi Cumar ayaa sheegay in booqashada ay ku tageen dalka Kenya ay la xidhiidhay marti qaad ay ka heleen madaxda sar sare ee wadanka Kenya, isla markaana ay gogol xaadh u soo samaynayeen socdaal uu Madaxweynaha Somaliland Mudane Axmed Siilaanyo ku tagi doono dalka Kenya kadib markii uu marti qaad u fidiyay Ra’isal Wasaaraha Wadanka Kenya Md.Railla odinga.
Wasiirku wuxuu tilmaamay in mudadii ay dalkaasi joogeen ay kulamo kala duwan la yeesheen Ra’isal Wasaaraha Kenya oo uu xusay inay ka wada hadleen arrimo badan oo taabanaya cilaaqaadka dhaqan dhaqaale ee labada wadan iyo sidii ay isugu diyaarin lahaayeen safarka uu Madaxweynaha Somaliland ku tagi doono Kenya.
Dr. Maxamed C/Laahi Cumar waxa kale oo uu ka waramay shirkii ay kaga qayb galeen Magaalada Istanbuul ee wadanka Turkiga,waxaanu iftiimiyay in shirkaas ay Somaliland uga soo baxeen arrimo wax ku ool ah,oo ay ka mid yihiin in dawlada Turkigu ay go’aansatay in Mucaawinooyinka ay siiso geeska afrika ,ay Somaliland si gaar ah teeda u qoon daysay,isla markaana ay dawlada Turkigu ay xafiis ay ka maamusho mucaawinooyinka ay ka furan doono Somaliland.
Wasiirka arrimaha dibada ee Somaliland waxa uu sheegay inay filayaan in ra’isal wasaare Ku xigeenka dalka Turkigu uu booqasho ku iman doono Somaliland si ay indhahooda ugu arkaan horumarka dhinacyada kala duwan leh ee Somaliland ku talaabsatay.
Wasiirka Khaarajigu waxa uu intaas ku daray in shirkada diyaaradaha ee Turkigu ay duulimaadyo ku iman doonto somaliland.
Previous articleTurkey offers boat for fish to Somalia.
Next articleMarwo Adna Oo Aflagaado u Geysatay Shacabka Soomaaliyeed‏.